I-Symbology kanye ne-psychoanalysis ku-Poe's The Fall of the House of Usher | Izincwadi Zamanje
Ukuwa KweNdlu Ka-Usher ingenye yemisebenzi eyaziwa kakhulu ye Edgar Allan Poe futhi njalo manje kufanele ngibuyele enkosini yokwesaba yaseBostonia. Kulesi sihloko ngilulama ingxenyeenye yalezo umsebenzi wasekolishi ukuthi ngosuku lwayo kwakudingeka ngivivinye. Lesi sikhathi yingcaphuno yesikhathi eside i-eseyi yokufanekisa nokuhlolwa kwengqondo lomsebenzi. Ilukuluku elilodwa nokunikela okuncane kumfanekiso wePoe omkhulu.
2 Indlu ka-Usher
3 Abazalwane baka-Usher
4 Isazi se-psychoanalyst Poe
4.1 Ingxenye yemibhalo esetshenzisiwe ngaleso sikhathi:
Kumuntu wokuqala, umlandisi ulandisa ngokuvakasha kwakhe kumngane wobuntwana, URoderick Usher, umnikazi wesithabathaba somuzi okungenani ongaziwa. Le ndoda iyagula ikutshela ukuthi woza uzomjabulisa. Uhlala nodadewabo Lady madeline, okuyiwo futhi ngigula kakhulu ngakho-ke uzizwa edabuke kakhulu.
Umlandisi uyadlula inkathi nomngani wakhe ezinikele ekukhulumeni, ekufundeni nasekulaleleni umculo. Kepha ngelinye ilanga U-Lady Madeline udlula emhlabeni, Noma, okungenani, kubonakala sengathi. Bazomshiya ebhokisini lomngcwabo, egumbini elingaphansi kwendlu.
Ukusuka lapho URoderick Usher uzolahlekelwa ikhanda lakhe kancane kancane futhi uya ngokuya egula kuze kube yibusuku obubodwa obuvunguvungu eqala ukucasuka kakhulu imisindo indlu yonke. Ukumqinisekisa, umbalisi uqala ukufunda incwadi aze ezwe futhi leyo misindo, njengokukhala nokukhala. URoderick Usher, osevele ehlanya, uyakubona lokho bamngcwabe ephila Yilapho-ke uLady Madeline kubonakala kubo, iqiniso eliqhamukayo ukufa komfowabo. Ngaphambi kwalokho ne ukuwa kwendlu okusondelayo umbalisi ubaleka eshiya ngemuva amanxiwa ukucwila echibini lendawo ezungezile.
Kuyadingeka ukugqamisa indima ebalulekile yendlu, ngoba ithonya lalo kubalingiswa futhi okuphambene nalokho linquma. Futhi i- amandla amabi lokho kudalula lelo thonya futhi okuholela ekufeni kwalabo ababephikisana nabo kanye nokucekelwa phansi kwesakhiwo. Lawo mandla atholakala ngokushesha ekuqaleni kwendaba lapho umxoxi echaza ukufika kwakhe nokuzwa usizi nokudabuka oveza umbono wendlu enkulu.
Vele, kulo mbono wokuqala, ukufa kuyabikezelwa ngoba lapho ubuka indlu nezindawo ezizungezile, njengechibi kanye nezihlahla ezomile, ungakuthatha ngokuthi into esekupheleni kokumelana kwayo nesikhathi, njengalezo zezakhamuzi zayo, ama-Usher amabili okugcina. NguLady Madeline, ongcwatshwe ephila ngaphambi kwesikhathi sakhe, obangela ukucekelwa phansi kwendlu, ngaphambi kwesikhathi sakhe futhi, nokushona komfowabo, ukuyicwilisa yonke echibini, njengoba nje indaba iphela.
Kodwa-ke, okulungisa ngempela lezi zinto, izinhlamvu eziningi njengezimo nezindawo, yi- ukwandiswa kwesimo somqondo, somqondo kaPoe. Lokhu kungabonakala ekufanekisweni kwabanye babo, ngokwesibonelo, i- indlu. House ngenxa yesimo sayo sezindlu ikhomba ngomzimba womuntu nangomcabango.
Ngale ndlela, isicabha kungasho ukuthi umfana, imaski engaphansi kobuntu bendoda. Okuhlukile phansi kungaba yizimpawu ze- ukuma mpo nesikhala. I ophahleni ophakeme kakhulu naphansi izohambisana ne- ikhanda nomcabango, okungukuthi, kwimisebenzi yokuqonda nokuqondisa. Ngokuphambene nalokho, i- engaphansi noma emiphongolweni kuzobonisa el uqulekile kanye nemizwa. the Escalera kungaba yi izindlela zokuhlangana kwezindiza ezahlukahlukene zemilingo futhi incazelo yalo eyisisekelo izoncika ekutheni ibukwa ngendlela enyukayo noma eyehlayo.
Okucacayo ukuthi kunokulingana phakathi kwendlu nomzimba womuntu, ikakhulukazi kwi ukuvuleka. Ubufakazi balokhu yi amagama yombalisi lapho emi phambi kwesithabathaba somuzi wase-Usher, echaza amawindi amnyama awabona 'njenge amehlo amnyama ebusweni obungenalutho".
Kwenzeka okufanayo echibini noma emanxiweni. Ichibi lingabonisa okufihliwe nokungaqondakali. Ngaphandle kwalokho, i ebusweni bamanzi alo ingafanekisela a Espejo, isithombe seqiniso, iqiniso elicwila kulawo manzi futhi lishiya amanxiwa kuphela. Zingasho futhi lezo imizwa noma okuhlangenwe nakho okuphilayo okungasenabo ubuhlobo obubalulekile kepha okuqhubeka nokukhona ngaphandle kokungasebenzisi noma ukusebenza ngokuya ngokuphila noma ngokucabanga.
Maqondana nabalingiswa nesikhundla umbhali asithathayo njengombalisi, lokhu alungeneli ngokuqinile endabeni noma ekudalelweni kwabaphikisi. Kubukeka sengathi uPoe uchithe okunye okuyinkimbinkimbi kwakhe ukukuhlanganisa noma, kunalokho ukukuveza, kuRoderick naseMadeline, ikakhulukazi kowangaphambili.
Kuye kwaba ngokoqobo kwembuleka nenye ingxenye ishiywe ngaphandle, njengomqapheli. Isifo sikaRoderick nokuwohloka komqondo yizifo zikaPoe ukuthi, ngenxa yakhe noma ngamehlo akhe, bangaphumela ngaphandle, bazikhulule bayeke ukuba ngumthwalo kumlobi.
U-Lady Madeline wayezohlanganisa ubuthakathaka bomoya wakhe. Kungaba yisimo sikanina lokho kuvela futhi kunyamalale emaphaseji endlu, engqondweni kaPoe, ngemizamo yokubuyela empilweni ngaphandle kwempumelelo. Zonke izinguquko zesigqi sendaba zizokwehlela kuLady Madeline noma ukuthungathwa komama olahlekile.
Isazi se-psychoanalyst Poe
Kepha kukhona futhi umzamo wokuphunyuka, wensindiso ekubhujisweni nasekufeni njengoba umbalisi ebonisa ekugcineni. Futhi ukuthi leyo ngxenye enengqondo, enengqondo futhi egxile kuyo ayibonile ngaphandle ibonakala iyenqaba leso siphetho abhekise kuso empeleni. Lokhu kufakazela ulayini omncane owahlukanisa ingqondo nokuhlanya empilweni kaPoe nokuthi ekugcineni kwasuswa ukuluthwa kwakhe wutshwala.
Kungashiwo futhi ukuthi uPoe wayengomunye wabokuqala abazama ukwenza i- uphenyo lwezindlela zomqondo ongazi lutho. Le ndlu ka-Usher, enamagumbi ayo amnyama, imihlobiso yayo eyinkimbinkimbi noma eqhekeka maphakathi nendawo engaphambili, ithathwe njengemodeli yangaphambi kukaFreudian yalowo mqondo oqulekile.
Lapho ezikhathini zamanje i- indlela ye-psychoanalytic emsebenzini kaPoe, bebefuna ukuthola ukwehla kwekhwalithi yezincwadi zakhe. Kepha ngasikhathi sinye, abagxeki abaqhubeka nokutadisha umsebenzi wakhe nabo bayaqhubeka nokumthatha njenge- a iphayona ku-aesthetics, umcwaningi womqondo womuntu kanye nochwepheshe wemibhalo.
Kunoma ikuphi okusobala ukuthi izindaba zabo zihlala kwimemori njengoba isibonelo sokufuna imfihlakalo nokulindela ukwesaba okwenziwa ngabantu.
Ingxenye yemibhalo esetshenzisiwe ngaleso sikhathi:
E. Cirlot, Isichazamazwi Sezimpawu, Ezabasebenzi, Barcelona, ​​1988.
I-Norton Anthology Yezincwadi ZaseMelika, ENew York, ngo-1989.
Inkondlo Engaziwa, i-anthology yemibhalo ebalekayo eyenziwe yi-EA Poe, Izincwadi Zemizi Yamadolobha, iSan Francisco, 1980.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » I-Symbology kanye ne-psychoanalysis ku-Poe's The Fall of the House of Usher
Sawubona, kufanele ngenze umsebenzi ngalo msebenzi futhi kunemibuzo emibili engingakwazi ukuyiphendula. Lezi yilezi: U-Usher ufuna umngani wakhe aboneni? Futhi kufanele ngikhombe izinto zothando ezizithethelele ngezingcaphuno zombhalo ... ngiyabonga kakhulu uma ungangisiza!
UMaria Florence kusho
inyanga enhle kakhulu isetshenziselwe ukwenza i-monograph
Phendula uMaria Florence
ULucia Sánchez kusho
Ngicela usitshele, uthini u-Usher ngendlu ahlala kuyona?
Phendula u-lucía Sánchez
UMaria Teresa kusho
Kungenzeka kanjani ukuthi ngisho nasendabeni yokufundisa ngezincwadi kumele sibone ukusabalala okubanzi "kokuncane" kuvela, esikhundleni se "okungenani" okuyikho? Yile ndlela okushiwo ngayo uma inencazelo yokuthi "okungenani", "okungenani", "okungenani", okungenani "..." Okuncane "kunencazelo nokusetshenziswa okuhluke kakhulu:" Omdala enginguye , lapho ngikwazi ukuthwala amaphutha amancane ”; "Uma uqhubeka, kulapho kufanele ubuyele khona kakhulu."
Phendula uMaria Teresa
UCamilo José Cela. Umndeni kaPascual Duarte ngemisho eyi-12